Goorma Banka Brite Beer waa lagama maarmaan-News-NingBo COFF Makiinado Co., ltd
Goorma ayaa loo baahan yahay Haamaha Beerka ee Brite
Waqtiga: 2021-09-20 Faallo: 22
Maxay qaar ka mid ah kuwa wax soo saara u adeegsadaan haan biir ah oo ka soo horjeedda inay iibsadaan haamo badan oo Uni ah. Sifooyinka iyo qaababka wax -soo -saarka ayaa go'aamin kara haddii aad u baahan tahay iyo haddii kale.
Haddii aad dhalo ku shubto, gasacsato, ama ku dhejisid warshad-khamri waxay sida caadiga ah yeelan doontaa hal taan oo bur ah oo loogu talagalay 4-5 fermenters kasta. Beerku wuxuu caadi ahaan ku qaadan doonaa 2 maalmood haan aad u fiican si loo caddeeyo loona hagaajiyo heerarka kaarboonka halka inta badan kuwa wax siiya ay biirka u hayaan 10-20 maalmood.
(Sawirku waa 1000L Brite Beer Tank oo loogu talagalay macmiilka Denver ee Maraykanka)
Haanta Brite waxay kuu oggolaaneysaa caddeyn aad u weyn iyadoo laguu oggolaanayo inaad si khafiif ah uga wareejiso khamiirka. Markaad khamiirka ka soo saartid shaagagga waxaad ka tagtaa lakab khamiir ah derbiyada iyo koorta. Qamiirkaasi wuxuu ka niyad jabiyaa khamiirka kale inuu ka soo dago sababo la mid ah kharashyada la midka ah oo saamayn weyn ku leh caddeynta biirka. Taangiga Brite wuxuu leeyahay sagxad digrii ah oo 5 digrii ah taas oo keenta khamiirkii ugu dambeeyay ee soo boodbooda inuu ku sii sugnaado xagga hoose oo uusan marin marin biirkii ugu dambeeyay, ha ahaado mid la xirxiray ama mid qabyo ah. Tani sidoo kale waa sababta baararka wax lagu karsado ay u doortaan inay si toos ah uga soo qaataan taangiyada xanafta leh ilaa qasabadaha. Sawir biir cad ilaa dhammaadka!
Waxaa qoray Jessie Min
Previous: In ka badan 95% Badeecadaha COFF ee Dibedda loo Dhoofiyo
Xiga: 5BBL Nidaamka Brewhouse Steam Brewhouse waxaa loo raray Yokohama Japan